Ahoana no handrefesanao ny fiantraikan'ny algorithm amin'ny fikarohana finday? | Martech Zone
Talata, Aprily 14, 2015 Talata, Aprily 14, 2015 Douglas Karr
Nandefa momba ireo dingana ilaina izahay sorohy ny fahaverezan'ny fivezivezena amin'ny fikarohana amin'ny alàlan'ny fikarohana finday ao amin'ny Google ho avy herinandro manomboka izao. Ireo namanay ao amin'ny gShift dia nijery akaiky ny fanovana ary namoaka iray lahatsoratra lalina momba ny fiantraikany andrasana ny fiovan'ny algorithm.
Mba handrefesana ny fahatsapan'ny mpivarotra sy hanangonana hevitra momba io fanovana lehibe io, ny gShift dia nanao fanadihadiana tamina mpivarotra dizitaly miisa 275 manerana ny indostria isan-karazany ao anatin'izany ny antsinjarany, ny dia ary ny fiara mandeha amin'ny fiara. Izahay dia nanao an'io fanadihadiana io teo anelanelan'ny 25 martsa - 2 aprily ary mihoatra ny 65 isan-jaton'ny mpandray anjara no mpanapa-kevitra amin'ny ambaratonga ambony izay misy ny lohany hatramin'ny talen'ny ka hatramin'ny CMO. Ny valiny voarainay dia nampiseho fomba fijery mahaliana momba ny fanomanana ireo matihanina amin'ny indostria amin'ny fanovana ny 21 aprily.
Mahaliana fa mihoatra ny antsasaky ny mpivarotra nomerika rehetra mino fa ho be ny fiatraikany… fa ny mampatahotra kokoa dia ireo mpivarotra nomerika ireo fa tsy manana fomba hijerena ny vokany. Ny rindrambaiko fisian'ny gShift dia manara-maso ny laharan'ny tranonkalanao amin'ny karoka finday.
Azonao atao koa ny manomana ny orinasanao amin'ny fiovan'ny algorithm SEO mobile 21st Google amin'ny alàlan'ny gShift manokana Tatitra momba ny benchmark SEO mobile ny fipetrahan'ny fisian'ity tranonkala ity eo amin'ny birao vs. finday. Ary aza hadino ny mahazo fampisehoana amin'ny sehatra misy azy ireo - mahavariana tokoa!
Tags: Aprily 21fikarohana finday googlealgorithma fikarohana finday googlegshiftfilaharana findaykaroka findayfinday seo